चाणक्य नीतिः तपाईंको यस्ता चार बानी छन् भने कहिल्यै भइँदैन असफल | Ratopati
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeफागुन २९, २०७६ chat_bubble_outline0
२. आचार्य चाणक्यका अनुसार हामीले आफ्नो घरको कुरा घरमै सिमित राख्नुपर्छ । जब मानिसहरुले घरको स–सानो कुरा बाहिरका मानिसहरुसँग गर्दै हिँड्छन् तब विभिन्न प्रकारको समस्याको सामना गर्नुपर्छ । बाहिरका मानिसहरुले तपाईंबारे थाहा पाएर तपाईंविरुद्ध षड्यन्त्र रच्न थाल्छन् जसले गर्दा घरमा झगडा पैदा हुन्छ । चाणक्यका अनुसार श्रीमान् र श्रीमतीबीचको कुराकानी पनि सिमित राख्नुपर्छ किनभने यस्ता कुरा दुबैको सम्मान र अपमानसँग जोडिएको हुन्छ ।
३. हाम्रो जीवनमा यस्ता थुप्रै पल आउँछन् जब हामीले अपमान सहनुपर्छ । चाणक्यका अनुसार अपमानित हुँदा अरु कुनै व्यक्तिसँग यसबारे चर्चा गर्नुहुँदैन । आफ्नो अपमानलाई गोप्य राख्नुपर्छ । मानिसहरुलाई यस्ता कुरा बताउँदा उनीहरुले तपाईंलाई मद्दत गर्नुको साटो तपाईंको खिल्ली उडाउन सुरु गर्छन् । यसले तपाईंको मनोबल टुट्छ ।